Rag lagu eedeeyay Miino aasid oo Maxkamadda Ciidanka xukun yaab leh ku riday. — CAASIMADA
Home WARARKA MANTA Rag lagu eedeeyay Miino aasid oo Maxkamadda Ciidanka xukun yaab leh ku...
Rag lagu eedeeyay Miino aasid oo Maxkamadda Ciidanka xukun yaab leh ku riday.
Muqdisho (Caasimadatimes)-Maxkamadda Ciidamada qalabka sida ee dowladda Federaalka Soomaaliya ayaa xukun Xabsi ah ku ridday 3 qof oo lagu soo eedeeyay in ay ka tirsanaayeen Al-shabaab islamarkaana qaabilsanaayeen Miino aasidda.
Maxkamadda Ciidamada ayaa labada eedeysane ee kala ah; Cabdikariim Maxamed Maxamuud Xuseen (Siiseey) iyo CabdiQani Cali Maxamuud Cali (Buneyste) ku xukuntay 15 Sano oo Xabsi Ciidan ah halka Cali Muxudiin Abshir (Cali Kuulow) lagu xukumay 5 sano oo xabsi Ciidan ah.
Guddoomiyaha Maxkamadda darajada 1aad ee Ciidanka Qalabka sida Xasan Cali Nuur SHuute ayaa ku dhawaaqay Xukunka waxaana uu intaas ku daray in xukunkan uu leeyahay Racfaan muddo 30 cisho gudahood ah.
Previous articleCiidamada Dowladda oo xiray Dhamaan wadooyinka soo gala Dhuusamareeb.Maxaa Soo kordhay?
Next articleCabdi Kariin Guuleed oo War aan horey looga baran ka soo saaray xaalada Galmudug
Sawirro: Dowladda Somalia oo sameysatay guddi baahi weyn u qabeen Shacabka...
DEG DEG: Wafdi ka socda Kenya oo Nairobi kasoo duulay kuna...